अमेरिकाको अत्यासलाग्दो देह व्यापार :: बाल जोशी :: Setopati
अमेरिकाको अत्यासलाग्दो देह व्यापार जिन्दगी 'होल्ड मोड' मा राखेकी देह व्यापारी क्रिस्टिनाको कथा
बाल जोशी अमेरिका, भदौ १८
नभाडा राज्य स्थित एक बेश्यालयको कोठा
अमेरिकी श्रम दिवस विशेष
टेक्सासको डालस नजिकै रिचर्डसन सहर भित्र पर्ने एक 'अफिस कम्प्लेक्स' भित्रको कोठा नम्बर १०६ मा हामीले क्रिस्टिनालाई भेट्यौ। उनको जन्म नाम 'मारियाला' हो तर विगत ३ महिनादेखि उनी 'मारियाला' बाट क्रिस्टिना भएकी छिन्। भेनेजुयलाकी मारियाला 'क्रिस्टिना' बन्नुमा लामो कारण छ। यही कारण बुझ्न हामी 'पीप्म', जसलाई नेपालीमा यौन दलाल भनिन्छ, को सहारामा त्यो अत्यासलाग्दो कोठामा प्रवेश गरेका थियौं।
उनको नाम मात्र परिवर्तन भएको छैन, जीवनमा उथलपुथल नै आएको छ।
'नो फोटो प्लिज'… ! मैले आफ्नो खल्ती बाट फोन बाहिर निकालेपछि आफ्ना तस्बिरहरू नखिच्न क्रिस्टिनाले आग्रह गरिन्। उसो त उनको तस्बिर होइन, आवाज मात्र रेकर्ड गर्न मैले फोन निकालेको थिएँ।
मैले सरसर्ती कोठा नियालेँ। मधुरो बत्ती, रातो र पहेँलो रङ्गले पोतिएका दिवारहरु, छेउमै राखिएको एक 'मसाज टेबल' र सानो 'साइड टेबल' जहा लोसनका प्रकारहरू र एउटा डिजिटल घडी, अनि पृष्टभूमीमा बजिरहेको 'रिल्याक्सेसन म्युजिक'। यो त 'मसाज पार्लर' जस्तो पो छ त? मैले आफ्नो परिचय दिँदै कुराकानी यही उत्सुकताबाट सुरू गरेँ। '‘दुनियाँका लागि यो मसाज पार्लर नै हो, तर भित्रको कुरा तिमीले बुझिसकेका छौ। मैले भनिरहन परेन’, टुटे फुटेको अङ्ग्रेजीमा क्रिस्टिनाले मेरो उत्सुकता मेटिन्।
सम्पन्नताको शिखर पुगेको भनिएको देश अमेरिकाका धेरै भित्री कथाहरू आवरण भन्दा बेग्लै छन्। भत्किएका सपना र चुलिएका महत्वाकांक्षा बोकेर जीवन बाFचिरहेकाकाहरू अरूका नजरमा 'गतिलो' देखिनु अब बाध्यता मात्र होइन- रोग नै बनिसकेको छ।
सायद, क्रिस्टिना पनि त्यही रोगको सिकार हुन्। आफ्नो अनुमानलाई प्रमाणित गर्न उनलाई मैले प्रश्न गरेँ - ‘अनि तिमी यो पेसामा किन?’ ‘यिनका लागि’ छेउमै राखेको रातो पर्सबाट मायालाग्दी बालिकाको तस्बिर देखाउँदै क्रिस्टिनाले दुई शब्दमा आफ्नो कारण सुनाइन्।
पृष्ठभूमिमा बजिरहेको रिल्याक्सेसन म्युजिक अब चीत्कारमा परिणत भइसकेको भान भयो। मलाई लाग्यो, त्यो अँध्यारो कोठाबाट क्रिस्टिनाको पीडा आवाज बनेर बाहिर चियाउन खोजिरहेछ।
दक्षिण अमेरिकाका गरिब राष्ट्रहरू मध्यको एक भेनुजुयलामा भइरहेको मुद्रास्फिति (इन्फ्लेशन) का कारण पछिल्लो एक वर्षमा झन्डै ३० लाख नागरिकले देश छोडेका छन्। तिनै ३० लाख मध्येकी एक हुन् क्रिस्टिना।
गत महिनाको तथ्याङ्क अनुसार भेनुजुयलाको वार्षिक इन्फ्लेसनदर ८३ हजार प्रतिशत पुगेको छ। जसका कारण महँगी चरम छ। यो समाचार तयार पार्दा बखत १ अमेरिकी डलर बराबर २ लाख ४८ हजार भेनुजुलियन बोलिभर छ। यही महंगो डलर कमाउन ९ वर्षको छोरीलाई उतै छोडेर तीन महिनाअघि चोर बाटोहुँदै अमेरिका छिरेकी हुन् क्रिस्टिना।
दिनमा १०-१२ ग्राहकलाई यौन सन्तुष्टि दिने क्रिस्टिना भित्रबाट बिलकुल असन्तुस्ट छिन्। तर, असुन्तष्टी देखाउने अधिकार उनले 'पिम्प' लाई बेचिसकेकी छिन्। ‘एउटा ग्राहकबाट ५०-१०० डलरसम्म कमाइ हुन्छ। तर, ८० प्रतिशत जति पिम्पले नै लिन्छ र पनि राम्रै कमाई भइरहेको छ,’ उनले भनिन्।
अमेरिकासम्म पुग्दा लागेको खर्च तिरेको दलालले नै ग्राहकहरू खोज्ने, कोठाको सजावटदेखि भाडा तिर्ने भएकोले ठूलो हिस्सा लिने उनको बुझाई छ। ‘तर, धेरै लामो समय यो काम गर्दिनँ, जिन्दगी अहिले 'होल्ड मोड' मा छ- धेरै गरे १ वर्ष’, अघिदेखि हातमा समातिराखेको छोरीको तस्बिरतिर टोलाउँदै क्रिष्टिनाले झर्न लागेका आशुका थोपा परेलामा नै कतै लुकाइन्।
मानव सभ्यताकै सबैभन्दा पुराना पेसामध्येको एक 'देह व्यापार' अमेरिकाका गैर कानुनी छ। नभाडा राज्यका ८ वटा काउन्टीका २१ वेश्यालयबाहेक अमेरिकाभरी यो पेषा पूर्णरुपमा प्रतिबन्धित छ। तर, क्रिस्टिना र क्रिस्टिनाजस्ता लाखौँ महिलाहरू यो व्यवसायमा संलग्न छन्। यौन हिंसाका विषयमा कार्यरत युरोपियन संस्था, फाउन्डेसन स्केल्लासको एक तथ्याङ्क अनुसार अमेरिकामा मात्र वार्षिक १५ बिलियन डलर बराबरको कारोबार देह व्यापारले गर्छ।
विश्वका अन्य मुलुकको तुलनामा अमेरिकामा देह व्यापारसँग सम्बन्धित कानुन अत्यन्त कडा छ। अमेरिकी न्याय मन्त्रालय (डिपार्टमेन्ट अफ जस्टिस) का अनुसार वार्षिक रूपमा अमेरिकामा करिब ५५ हजार देह व्यापारसँग सम्बन्धित प्रक्राउ हुन्छन्। जसमध्ये दुई तिहाइ महिला छन्।
रोचक पक्ष त के छ भने 'पोर्न स्टार' सँगको यौन सम्पर्कलाई बाहिर आउन नदिन ठूलो रकम तिरेका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नै गएको अप्रिलमा एक नयाँ कानुनमा हस्ताक्षर गरेका छन्। जस अनुसार इन्टरनेट मार्फत यौन व्यवसाय बढाउनेलाई राज्यस्तरमै कडा भन्दा कडा कारबाही गर्न सकिने छ।
अमेरिका नभाडा राज्य स्थित एक वेश्यालयको कोठा
अमेरिकामा मुख्य गरी पिम्पमार्फत यौन कारोबार हुन्छ। धेरै जसो पिम्पहरुले इन्टरनेटको सहाराले लिएका हुन्छन्। सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने ब्याक्पेज डट कमलाई अमेरिकी सुरक्षा निकाय एफबिआईले ९३ वटा अपराधमा गत अप्रिलमा बन्द गरिसकेको छ। क्रयाग्लिस्ट पनि आफ्नो साइटबाट 'यौनजन्य विज्ञापन' हटाएको छ। तर बाँकी धेरै वेबसाइटहरूले यौनकर्मी र ग्राहकलाई जोड्दै आएका छन्।
अमेरिकामा अनलाइन मार्फत हुने देह व्यापारको एक तथ्याङ्:
ग्राहक, देह व्यापारी र बिचमा बसेर सबै तर्जुमा गर्ने पिम्पहरु कानुनको दायरामा पर्छन्। राज्यअनुसार यौनजन्य अपराधको सजाय फरक भए पनि केही हजार डलर जरीवानादेखि ३० वर्षसम्मको जेल सजाय यौन अपराधीलाई रहेको छ।
कडा कानुनका बाबजुद पनि किन र कसरी यो ब्याबसाय मौलाएको छ त? विश्वव्यापी उत्तर हो - गरिबी।
तर अमेरिकामा पनि जोहो टार्न शरीर बेच्नुपर्ने? हरेक दिन वैभव र सम्पनताका कथाहरू लेख्ने अमेरिका भित्र नै झन्डै २० लाख मानिसहरू छन् जसको चुल्हो बल्न अरू कसैलाई 'क्षणिक खुसी' दिन आफ्नो जीवन भरिको खुसीको गला निमोठिनुपर्छ।
प्रकाशित मिति: आईतबार, भदौ १७, २०७५, १०:५५:००